G-mail တွေအကြောင်း နည်းနည်းလေ့လာရအောင်... - Min Oaker
ဗဟုတုတဆိုင်ရာ နည်းလမ်းလေးများ G-mail တွေအကြောင်း နည်းနည်းလေ့လာရအောင်...
by Min Oaker on 1:20 AM in ဗဟုတုတဆိုင်ရာ နည်းလမ်းလေးများ
ကျွန်တော်တို့ IT ခေတ်ကြီး ထဲမှာလူတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားတိုင်းမှာ ကြားနေရတဲ့ Gmail ဆိုတာဘာလဲ...
ဂျီမေး(gmail) ဆိုတာ google ကနေ ၀န်ဆောင်မှုပေးထားတဲ. စာပို့ဆောင်ရေးစနစ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ဂျီမေးကို အေပရယ်လ ၁ရက်နေ. ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ဖိတ်ကြားခြင်း(invitation) တစ်ခု အတွက်သာ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ.ပြီး၂၀၀၇ခုနှစ်ဖေဖေါ်ဝါရီလ မှာ အများပြည်သူ အထွေထွေသုံး ဖို.ဖြစ်လာခဲ.ပါတယ်။၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ တစ်လကို ဂျီမေးကို သုံးစွဲသူပေါင်း ၁၉၃.၃ သန်း ရှိတယ်လို.ဆိုပါတယ်။သိမ်းဆည်းထားနိူင်မှု ဂျီမေး လက်ရှိ သိမ်းဆည်းထားနိူင်မှု (7GB) ကိုဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ. အလကား ပေးထားပါတယ်။အသုံးပြုသူများအနေနဲ.သိမ်းဆည်းမှု ထပ်မံတိုးမြင်.ရန် ဌားရမ်းခ အနေနဲ. (20GB) တစ်နှစ်စာအတွက် အမေရိကန် ၅ ဒေါ်လာ ၊16 TBတစ်နှစ်စာ အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၀၉၆ ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အေပရယ်လ ၁ ရက်နေ့ ဂျီမေးနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ဂျီမေးရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု မန်နေဂျာ Georges Harik က (1GB)ထပ်မံတိုးမြှင်.ပေးရန် ကြေငြာခဲ.ပြီးဂျီမေးကနေ အသုံးပြု သူ များအတွက် သိမ်းဆည်းထားနိူ်င်မှုများ ထပ်မံ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ် လို. ပြောကြားသွားခဲ.ပါတယ်။
By Min Oaker at 1:20 AM